Hadalo sir ah oo Ra’iisal Wasaare Gaas ka sheegay Madaxweyne Shariif, Loolanka Labada Nin oo bilawday, Warbixin dhinacyo badan ka hadlaysa | Calanka Somalia
← Fadeexadii Faroole & Caalin Dubai
Sidee looga xusay 1 Luulyo Oslo, Norway →
Hadalo sir ah oo Ra’iisal Wasaare Gaas ka sheegay Madaxweyne Shariif, Loolanka Labada Nin oo bilawday, Warbixin dhinacyo badan ka hadlaysa
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda KMG ah ayaa waxaa uu doonaya inuu tartan adag la galo Madaxweynaha Dowladda KMG ah Shariif Sh Axmed bil iyo 20 cisho marka la gaaro marka loo ballansan yahay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya bisha Augost 20 keeda.
Marwada uu qabo Ra’iisal Wasaare C/weli Maxamed Cali ayaa Magaalada Toronto ka sheegtay inuu istaahilo ninkeeda in loo doorto Madaxweynaha Soomaaliya iyadoo dadkana u ballan qaaday inuu cadaalad ku hogaamin doono wadanka waa marka uu helo codadka 135 Xildhibaan.
Marwada Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Ra’iisul Somalia Hodan Ciise ayaa u ballanqaaday in la aqbalay codsiga dadweynaha Soomaaliyeed ee Toronto oo ku wajahan ra’iisul wasaaraha DKMG ah, kaasoo ah in dalka lagu hoggaamiyo cadaalad iyo sinnaan.
Waa Sawirkii ugu horeeyay ee Xaaskiisa soo bandhigtay Xaflad ka dhacday Toronto ee Ololaha doorashada
C/weli Maxamed Cali oo dhawaan Magaalada Kambala kula kulmay ganacsato beeshiisa ah ayaa waxaa uu ka codsaday in laga caawiyo iibinta codadka Xildhibaanada inta isaga u baahan yahay oo ah 130 Xildhibaan.
:Haddii aan helo 130 Xildhibaan codkooda markaas waa ii cadahay inaan noqon doono Madaxweynaha Soomaaliya:ayuu hadalkiisa raaciyay Gaas.
Haatan waxaa la sameeyay guddi ganacsato ah oo ku heyb ah Ra’iisal Wasaaraha kuwaas oo tashkiilis iyo iibin cod ku bilaabi doono Xildhibaanada cusub.
Ninka la filayo oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu ku soo laaban doono Xafiiska Waa Madaxweyne Shariif waxaa uu loolan adag la galayaa Ra’iisal Wasaarihiisa.
Sanad ka hor cidna kuma fikiraynin in C/weli uu damac ka geli doono Jaga Madaxweyne Laakiin damacasaas waxaa uu soo baxay markii la sameeyay qariirada Nabada taas oo isaga siisay awoodo badan oo kula loolami kara Madaxweynaha.
Gaas hadda waxaa uu isku halaynaya Xildhibaanada Beesha daarood iyo wixii uu ka helo Shariif Xasan oo inta badan Xildhibaanada Digil iyo Mirifle gacantiisa ku soo qori doono.
Shariif Xasan si u noqdo Guddoomiyaha Baarlamaanka waxaa uu taageero ka raadinayaa xubnaha ka imaanaya Puntland iyo beelaha kale ee sida Murusade oo Siyaasadda Shariif Xasan qeyb ka ah.
Wixii kale jeebkiisa ayuu u adeegsan doona sida cad waayo Xubnaha imaan doono ee meteli doona Baarlamaanka la iskuma halayn karo waxaa hogaamiya oo kaliya jeebka.
Ra’iisal Wasaare Gaas ayaa ku eedeeyay mar sii horeysa Madaxweyne Shariif inuu ku fashilmay waxqabadkii looga baahna taas oo daliil u ah loolanka Labada nin.
Sidoo kale Gaas ayaa meel adag ka is taagay markii shirkii Nairobi socday bishii hore rabitaanka Madaxweyne Shariif ee wax ka bedelid qeybo ka mid ah Dastuurka.
Haddaba Ra’iisal Wasaare Gaas ayaa u gudbiyay diblomaasiyiinta ku sugan Nairobi in Madaxweyne Shariif lacagta qaranka u adeegsanayo doorashada soo socota.
Diblomaasi ka tirsan Safaaradda Mareykanka Nairobi ayaa u sheegay rag uu Nairobi kula kulmay in ay ka war haayan in Madaxweyne Shariif Lacagta qaranka u adeegsan doono doorashada bisha Augost dhacaysa.
Arrintaas ayaa waxaa la leeyahay waxay ka dhalatay shaki ah in Ra’iisal Wasaare Gaas uu xog badan ka haaya xaalada Madaxweynaha u gudbiyay Safaaradaha Nairobi ku yaala.
Waxaa kaloo jira Siyaasiyiin iyagana Safaaradaha Nairobi wareegaya oo ku doodaya in Madaxweynaha lacag fara badan oo qaranka leeyahay iyo Warbaahinta qaranka u adeegsan doono doorashada soo socoto.
Arrintaas oo hadda baaritaankeedu socda haddii sax noqotay markaas waxay u badan tahay in Madaxweyne Shariif lagu yiraahdo ka tag Xafiiska sidii ku dhacday Madaxweynihii geeriyooday C/llaahi Yuusuf markii ay is qabteen Ra’iisal Wasaarihii waqtigaas oo ahaa Nuur Cadde.
Awooda Soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa xubnaha beesha Caalamka ee fadhigooda yahay Magaalada Nairobi kuwaas ayaa sidii doonaan u maamula Siyaasadda dalka.
Madaxweyne Shariif ayaa isna jeebkiisa u adeegsan doono xubnaha Baarlamaanka cusub.
Madaxweynaha ayaa haysta lacag fara badan oo si sahal ah ku heli kara codadka xildhibaanada.
Haddaba waxaa la ogaan doona sida labada nin ololahooda u maareeyan dhamaadka bishan
Posted on July 3, 2012, in Moment Research & Consultancy. Bookmark the permalink.	Leave a comment.